के तपाइँ शीर्ष-लोड वा अगाडि-लोड ब्याकप्याक किन्नु पर्छ?
टेक र गियर सामान
by लरेन जुलिफ
कुन शैलीको ब्याकप्याक यात्रीहरूको लागि उत्तम छ?
माथिल्लो वा अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याकको बीच निर्णय गर्दै यो यात्राको लागि जब तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छनौटहरू मध्ये एक हो। गलत एक छनौट गर्नुहोस् र तपाइँ आफैलाई हेल-फिटिंग प्याकेज र एक प्याक-प्रेरित ब्याकसुकको साथ होस्ट हस्टलमा ट्राउजिङ्ग पत्ता लगाउनुहुनेछ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्: म त्यहाँ गएको छु।
सम्झना सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि तपाई सम्भवतः तपाईंको ब्याकप्याक हप्तामा धेरै चोटि राख्न ठाउँ पाउनुहुनेछ, त्यसैले यो आरामदायक छ र तपाईंको ब्याक, क्यान्सर, र कमरको लागि समर्थन प्रदान गर्दछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं आफैले ह्यान्डलहरूमा रहँदा कम्तीमा एक पटक तपाईंको ब्याकप्याक अनप्याक गर्ने र तपाइँको ब्याकप्याक पुन: पुन: पत्ता लगाउनुहुनेछ, त्यसैले तपाइँ निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि यो छिटो र त्यसो गर्न सजिलो छ।
अगाडि-लोड हुँदै वा शीर्ष-लोड हुँदै हुनुहुन्छ? गत छ वर्षमा, मैले दुवै प्रकारको ब्याकप्याकको साथ यात्रा गरेको छु र मैले दुवैसँग फाइदा र समस्याहरू अनुभव गरेको छु। यहाँ वजन-अप कसरी हुन्छ जुन तपाइँको लागि उत्तम विकल्प छ।
अगाडि-लोड ब्याकप्याकका फाइदाहरू
दुई वर्ष पछि एक शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याकसँग यात्रा गरेपछि, मैले अगाडि-लोडिङ एक (ओस्पे फरपोइन्टपोइन्ट 55 एल प्याक) मा स्विच गरें र फिर्ता नदेखेको छु।
तिनीहरू अधिक सुरक्षित छन्: सामान्यमा, अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याक्सले शीर्ष-लोड भन्दा बढी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यो दुर्लभ हो जब तपाईं यो सडकमा लुटपाइने छ भने, यदि तपाईं यो भइरहेको बारेमा घृणा गर्नुहुन्छ भने, उनीहरूको दिमागमा अधिक शान्ति प्रदान गर्दछ। अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याक्सले पानाहरूसँग सूटकेसलाई बढी काम गर्छ, त्यसमा तिनीहरू अगाडिको जिपको साथ सुरक्षित हुन्छन्।
के यो अर्थ हो कि तपाईं चोरहरू जुन छिटो चोरी गर्न खोजिरहेका छनौट गर्न सजिलै एक प्याडल थप्न सक्नुहुन्छ। शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्स प्राय: ड्रस्टस्ट्रिंग र प्लास्टिक क्लप्स द्वारा सुरक्षित हुन्छन्, तिनीहरूलाई सजिलो बनाउन। त्यहाँ तपाईंको बैगको लागि एक जाल रक्षक ले परे बाहिर सुरक्षित गर्न तपाईं धेरै गर्न सक्नुहुन्न।
तिनीहरू प्याकेज गर्न सजिलो छ: अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याक्सहरू शीर्ष-लोड हुँदै जाने व्यक्तिहरूको तुलनामा प्याक र अनप्याक गर्न सजिलो छ। केवल आफ्नो ब्याकप्याक अनबिप गर्नुहोस्, र यो सूटकेस जस्तै प्रकार्य गर्नेछ - तपाईं सबै चीजको रूपमा जहाँ तपाईं यो चाहानुहुन्छ माथि जानुहुन्छ सबै भन्दा माथिको सानो छेद को माध्यम ले सबै चीज गर्न को लागी प्रयास गर्ने को लागी रोक्न सक्नुहुनेछ। म तिमीलाई भन्न सक्दिन कि कति पटक मेरो शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक अनप्याक गर्नु पर्छ भनेर केहि पत्ता लगाउनको लागि केवल तल Ten मिनेट पछि गर्न को लागी यो बाटो तल काम गरेको थियो। मेरो Farpoint ब्याकप्याकको साथ, म अब पनि पैकिंग र हरेक दिन अनपिकेर भइरहेको जस्तो लाग्छ।
तिनीहरू कमजोर छन्: मैले अगाडि आउँदै अगाडि-लोडिङ ब्याकपक्सहरू तिनीहरूको शीर्ष-लोडिङ समकक्ष भन्दा धेरै कठिन सामग्रीको बनाइएका छन्। यो सामान्यतया किनभने शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्सहरू पैदल यात्रा र साहसिक क्रियाकलापका लागि डिजाइन गरिएका छन्, जहाँ वजनका मुद्दाहरू। यसो गर्दा, मेरो अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याक एक विमानको कार्गो होल्डमा छुटेको थियो, जब मेरो यात्राको बेलामा मेरो शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्स एक टुक्रामा रह्यो, त्यसैले यसको मतलब छैन कि तपाईंको अगाडि-लोडिङ प्याकेज सुरक्षित हुनेछ। हानि।
तिनीहरू कम्तिमा एक फ्रेम हुन सम्भव छन्: त्यहाँ दुईवटा स्कूलहरू विचार छन् कि फ्र्याम गरिएको ब्याकप्याक राम्रो वा खराब कुरा हो।
यसले तपाईंको प्याक यसको आकारमा राख्न मद्दत गर्दछ यदि यो पूर्णतया पूर्ण छैन, तर यसले फ्रेमलाई ब्रेक गर्दा तपाईंको अनुहार बेवास्ता गर्न सक्दछ। आफ्नो ब्याकप्याक फ्रेममा दुई पटक स्न्याप गर्ने व्यक्तिको रूपमा जो कोहीले, म हानि-लोडिङ ब्याकप्याकलाई अर्को जाँच दिन क्षति स्तम्भमा एक फ्रेम राख्न सक्छु।
शीर्ष-लोड ब्याकप्याकका फाइदाहरू
मेरो पहिलो दुई वर्षको सडकमा, मैले ओस्प्रे एक्सोस 46 एल ब्याकप्याकको यात्रा गरे र यसलाई माया गर्थे। यो हल्का वजन, सजिलो, र मेरो सानो आकारको लागि एकदम राम्रो थियो। दुर्भाग्यवश, त्यहाँ केही हानिहरू थिए (मैले माथि उल्लेख गरें), जसले अन्ततः मलाई सुचारु गर्यो।
यहाँ, यद्यपि, फाइदाहरू छन्:
तिनीहरू साना व्यक्तिहरूका लागि अझ राम्रो छन्: शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्सहरू अघिल्लो-लोडिङ भएका व्यक्तिहरू भन्दा पतला छन्, जसले तपाईंलाई ह्यान्ड्सको माध्यमबाट हिडिरहन्छ वा ओभरड्रोड बसको गलीमा आफ्नो मार्ग बनाउन प्रयास गरिरहेको छ।
यदि तपाइँ सानो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, तपाईंले उनीहरूको पतला चौडाई तपाईंको ब्याकप्याकको आकारमा अझ राम्रोसँग भेट्टाउनुहुनेछ, यसलाई अझ सजिलो बनाउने। यो मेरो शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याकको ठूलो फाईदा थियो र मलाई स्वीकार गर्नु पर्छ कि म त्यस्ता स्लिमलाइनको प्याकेजमा मिसेको छु।
उनीहरूलाई राम्रो सहयोग प्रदान गर्दछ: शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्सहरू सामान्यतया लामो दूरीको पैदल यात्राको लागि बनाइन्छ, जसको अर्थ उनी तपाईंको पछाडीको र आफ्नो हिप्समा वजन लिन तयार छन्। तिनीहरू लामो दूरीमा हिँड्नको लागी धेरै सहज हुन्छन् - मेरो एक धेरै सहज थियो, म कहिलेकाहीं हिँड्नु पर्ने बेलामा मेरो पीडामा हिड्न थाल्छु। म थोरै थोरै घण्टामा यो घण्टा लाग्न सक्छु, र म मेरो अगाडि-लोडिङ प्याकेजको बारेमा भन्न सक्दिन। यदि तपाईंसँग धेरै प्याक शक्ति छैन र तपाइँको प्याकमा भारी लोडको साथ संघर्ष गर्न संघर्ष गर्नु, एक शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक निश्चित रूपमा तपाईंको लागि अधिक व्यवस्थित हुनेछ।
तिनीहरू हल्का हल्का हुन्छन्: किनभने तिनीहरू सामान्यतया ब्याकप्याक्सहरू हुन्, तिनीहरू सम्भव भए हल्का वजनको रूपमा बनाइन्छन्, जसले तपाईंको थलोलाई अझ सजिलो बनाउँछ। मलाई भरोसा राख्नुहोस्: आधे घण्टा पछि तपाईको हस्टलको खोजीमा सर्कलमा घेरिएको बित्तिकै, तपाईले तपाइँको आशिष् पाउनुहुनेछ कि तपाइँको भारी भारी छैन। म विश्वास गर्न सकेन कि मेरो शीर्ष-लोडिङ ब्याकपैक कसरी मेरो पछाडि हल्का महसुस गर्नेछु भन्दा यसको माथि उठ्ने क्रममा।
मैले कुन कुराको सिफारिश गर्छु?
एक बाहिरी पसलको प्रमुख जो कि Backpacks मा विशेषज्ञता छ, जस्तै REI, र अगाडि र शीर्ष-लोडिंग ब्याकप्याक्स दुवै प्रयास गर्नुहोस्। कुन कुरालाई अधिक सहज लाग्छ र सर्वोत्तम समर्थन प्रदान गर्दछ। स्टोरबाट अनियमित चीजहरूसँग ब्याकप्याक भर्न निश्चित गर्नुहोस् कि यसलाई कसरी केही वजनको साथ केहि लाग्छ भनेर हेर्नको लागि। तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं उस समयको लागि सान्त्वना चाहानुहुन्छ कि तपाई आफैंलाई भेट्न र 100 डिग्री गर्मीमा आफ्नो गेस्टहाउस फेला पार्न प्रयास गर्दै उस्तै केहि सडकहरूमा तल भेट्टाउनुहुन्छ। तपाईं मध्ये केहि मन मनपराउन सक्नु हुन्छ जुन तपाईंको थकमा प्याक गर्न सक्षम हुन्छ। यो तपाईंको प्राथमिकतामा के हो निर्भर गर्दछ, र बाहिर बाहिर आंकडा गर्न को लागि सबै भन्दा राम्रो तरीका व्यक्ति मा backpacks को चेक गरेर र जो तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो काम देखेर।
जब मैले मेरो पहिलो ब्याकप्याक किनेको छु, मैले पाएँ, किनभने म 5'1 '', शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक्स अगाडि अगाडि लोड हुँदै जाने व्यक्ति भन्दा बढी सहज थियो। मेरो ओस्प्रे ब्याकप्याकले वजनमा ठूलो मात्रामा कमी आईरहेको थियो दोस्रो पटक मैले यसलाई मेरो पछाडि राखे, तुरुन्तै यसलाई बेचेर।
निश्चित रूपमा केहि सुरक्षा समस्याहरू जुन शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याक किनेका छन्, यद्यपि - मेरो ब्याकप्याकको शीर्ष ड्र्रिस्टिंग र क्लिपहरूसँग बन्द गरिएको थियो, जुन थप पछाडि सुरक्षित हुन सक्दैन। यदि कसैले मेरो ब्याकप्याकबाट केही चोरी गर्ने निर्णय गरे भने यसले मेरो सबै चीजहरू बाहिर लगाउन र टाढा राख्न लगभग पाँच सेकेन्ड लिन सक्थ्यो। यसो भने, मैले तीन वर्षको लागि ब्याकप्याकमा यात्रा गरे र एक चोटि कुनै चोरी गरेन।
जब मेरो शीर्ष-लोडिङ ब्याकप्याकको फ्रेम तोड्यो, मैले यसको सट्टामा अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याकमा विभाजन गर्न निर्णय गरे। जब म 55 बर्षको सट्टा5मिनेटमा प्याक गर्न सक्षम हुन सक्दिन भने म एक ठूलो बोनस हो, म पनि मेरो पुरानो हल्का पैकको सम्झना पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। यात्रा दिन मेरो ठूलो, भारी ब्याकप्याकको साथ धेरै कठिन छन् र मेरो हस्टल पत्ता लगाउन खोज्दा वरिपरि हिँड्न सक्दैनौं। मेरो लागि, यद्यपि, थप सुरक्षा र प्याकिङ्गको सुविधाले यसको लायक अगाडि-लोडिङ ब्याकप्याक बनाउँछ। म मेरो ब्याकप्याक लक गर्न सक्दिनँ जब म अन्वेषण गर्न जान्छु र मेरो चीजहरू सुरक्षित छन् भनेर जान्दछन्, र यदि मलाई कहिल्यै मेरो ब्याकप्याकमा केहि फेला पार्न आवश्यक छ, यो पत्ता लगाउन कम्तीमा पाँच मिनेट भन्दा बढी लाग्छ।
ओहो, र यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि म सधैँ ओस्पे ब्याकप्याक्सको साथमा जान्छु, किनभने तिनीहरू जीवनभरको ग्यारेन्टी छ - यदि कुनै ब्याकप्याक्सको कुनैपनि कारणले तोड्न सक्दछ, उनीहरूलाई उनीहरूको कुनै प्रश्न सोध्दैनन्, भले ही तिनीहरू 20 वर्षको हो! मैले उनीहरूको ग्यारेन्टी अघि परीक्षण गरेको छु र मेरो ब्याकप्याक प्रतिस्थापन गर्दा कुनै समस्या भएन, म यात्रा गरिरहँदा र घरबाट टाढा रहँदा पनि।
8 बेस्ट रिसर्ड गार्ड्स 2018 मा खरिद गर्न
99बेइजिङ किन्नुहोस् 2018 मा
2018 मा खरीद गर्न 8 उत्तम टीएसए स्वीकृत तालाहरु
2018 मा खरीद गर्न 8 बेस्ट हर्टमैन सामान सामान
समीक्षा: Merrell Vertis वेंटिलेटर पर्वतारोही जूता
19धेरै उत्कृष्ट पैकिङ हैक Pinterest मा देखा पर्यो
Le Meridien न्यू ऑरलियन्स: बिग तर एक बुटीक होटल जस्तै लाग््छ
सेन्ट लुइसमा सर्वश्रेष्ठ वसन्त उत्सवहरू
यो न्यू जर्सी मा सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट मा थियो थियो
अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा कार भाडामा लिइयो
मूर्तिकला नगरी समुद्र तट
शीर्ष9ओडिशा आकर्षण र भ्रमणका लागि स्थान
शीर्ष6हांगकांग बीच - हङकङको सर्वश्रेष्ठ समुद्र तट
एरिजोना वाइन टेस्टिंग ट्रिप लिनुहोस्
योग, ध्यान, र मालिश को लागि शीर्ष 10 स्पा संगीत सीडी
विलियम्सबर्ग फ्री ईस्ट पार्क पार्क, ब्रुकलिन मा नि: शुल्क घटनाहरु
एक दृश्य संग बर्लिन
पोल्याण्डमा मनाईएको छुट्टियाँ
क्यानाडा मा साहसिक टूर कम्पनीहरु